Inona Ny Nanosika Ilay Reny Tokantena Ao Shina Namela Ny Zananivavy Ho Fatin’ny Hanoanana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2015 2:13 GMT
Vakio amin'ny teny bahasa Indonesia, русский, Español, English
Xiang Heping, ilay reny tokan-tena izay namela ny zananivavy ho fatin'ny hanohanana tamin'ny taona lasa. Dikasary avy tamin'ny CCTV nivezivezy tamin'ny Weibo.
Vao haingana, niresaka tamin'ny televiziôna ny amin'ilay fihetsika nahatsiravina nataony ilay reny tokantena any Shina izay namela ny zananivavy kely ho faty noana ho sazin'ny tsy nety nataony tany an-tsekoly tamin'ny taona lasa. Tamin'ny tafatafa ny 24 May, niteny tamim-pitomaniana izy hoe tia ny zananivavy hianatra tsara any an-tsekoly fotsiny izy ary ho tonga any amin'ny anjerimanontolo.
Satria niparitaka be nanerana ireo sehatra media sosialy any Shina ilay tantara, maro no niampanga ilay reny ho mpamono olona tsy misy indrafò, raha niezaka ny namakafaka ny fototry ny olana ara-tsosialy kosa ny sasany.
Nomena sazy 10 taona an-tranomaizina, tamin'ity taona ity, i Xiang Heping, 52 taona. Namatotra ny zananivavy 9 taona, Zhang Qiongdan (Dandan) izy, ary tsy nanome hanina sy rano azy nandritra ny enina andro tany amin'ny faritanin'i Guizhou, atsimo andrefan'i Shina.
Nitomany ary nanazava tao amin'ny tafatafa i Xiang hoe tiany loatra ny zananivavy ary tena tsy nieritreritra ny hamono azy mihitsy izy. Nilaza ilay loza nitranga ho vokatry ny fanantenany lehibe ny mba handehanan'ny zananivavy any amin'ny anjerimanontolo izy, nofinofy izay tsy tanteraky ny tenany, ary noho izany no nanosehany ny zananivavy hanatratra azy io amin'ny fialàna ny sàkana rehetra.
Nilaza i Xiang fa fadiranovana mafy izy tamin'ireo fanambadiana roa niainany. Nisintaka ny trano ny vadiny faharoa raha vao mahery kelin'ny iray volana monja i Dandan. Voatery niverina tany amin'ny tranon-dray aman-dreniny tany aminà tanàna tsizarizary izy ary nipetraka niaraka tamin'ny zananivavy tao amin'ny efitra fitahirizana entana. Nikarama ho mpamafa trano tao amin'ny magazay iray lehibe izy. Nitsindroka ireo fako teny amin'ny làlana ihany koa izy ary nivarotra izany mba hahavitàna manapitra ny volana.
Nihombo ny fifandonana teo amin'ilay reny sy ny zananivavy raha nanomboka ningitrika ilay ankizy vavy teo amin'ny taona fahatelo. Nilaza ny mpampianatra azy fa nanomboka tsy tia nanao ireo entimody ilay ankizy vavy, ary nilaza ireo mpiara-nianatra taminy tany an-tsekoly fa nitokatokana irery hatrany ilay ankizy vavy aorian'ny fianarana.
Tamin'ny voalohany, nohidian'ilay reny tao an'efitranony ny zananivavy, saingy nitsoaka teny amin'ny varavarankely izy ary nirenireny teny an-dàlana. Nanapa-kevitra ny hamatotra ny zananivavy tamin'ny fandriana àry i Xiang ny 4 Aprily 2014, ary tsy nanome azy sakafo sy rano ho sazin'ny tsy fianarany tsara any an-tsekoly. Nijanona ho mafy loha ny zananivavy ary tsy mba nifona na nangataka sakafo. Tezitra tamin'ny fahanginan'ny zananivavy i Xiang ka tsy nanajanona ny fanasaziana. Taorian'ny alina dimy, hitany tsy nahatsiaro tena ny zananivavy ary niantso pôlisy izy.
Mpivady miisa eo amin'ny 3,5 tapitrisa eo no nangataka fisarahana ny taona 2013 tany Shina, ary mitohy mitombo amin'ny hafainganam-pandeha mampahatahotra hatrany io fironana io. Mihamaro hatrany ireo reny tokantena tsy maintsy mandray andraikitra mitaiza samirery ireo zanany, sady miatrika ihany ny fanilikilihana sy ny ny teritery noho ny namakiany ireo lalànan'ny fiainam-piarahamonina, izay milaza fa tokony mijanona ao anatin'ny fanambadiana ireo vehivavy, na miatrika fanararaotana avy amin'ireo vadiny aza izy ireo.
Amin'ny lafiny iray, nifantoka loatra tamin'ireo fahatafitàm-pianaran'ireo ankizy fotsiny hatrizay ny rafitry ny fampianarana Shinoa, tsy nijery ny fahasalaman-tsainy rehefa miha lehibe izy ireny.
Maro ireo olona tezitra niampanga an'i Xiang tao amin'ny Weibo ilay toy ny Twitter sy tao amin'ny Toutiao, sehatra fanangonana ireo matoam-baovao:
“Karma an'ny fanahy”: Niezaka ny nanazava ny heloka nataony izy. Ny lehibe aza tsy mahavita miaina tsy misakafo sy tsy misotro rano mandritra ny enina andro, raha tsy hilaza ny ankizy. Tena nieritreritra ny hahafaty ilay zaza amin'ny hanoanana mihitsy izy. Tokony ho saziana mafy tokoa izy.
花海四海: 还好意思上诉 根本没有悔改的意思 一般人不会上诉 早就在悔恨内疚 她这个贱货还上诉 说什么不是 故意杀人 你的行为不是故意杀人是什么 向和平 你去死吧 反正我不原谅你 可怜你
“Ranomasim-boninkazo”: Ahoana moa no ananany fahasahiana hanao fandravàna didy? Tsy misy endrika fanenenana mihitsy. Nanenina mafy izany raha olon-kafa ary tsy hangataka fandravàna didy mihitsy. Tsy famonoana niniana natao ve ny fihetsikao? Mandehàna any amin'ny afobe, tsy hamela heloka anao aho ary tsy hitsetra anao akory.
“Raha tsyhiposaka intsony ny masoandro”: Tena manana olana ara-tsaina mihitsy ilay reny. Amin'ny maha reny, tia ny zanatsika ho tafita isika!. Fa tsy azoko mihitsy hoe ahoana no nijanonany tsy niraharaha ny hanohanana sy ny hetahetan'ny zanany nandritra ny andro maro toy izany… Tsy misy sakafo ary tsy misy rano. Ahoana no ahavitan'ny reny iray mahita izany vatana mahia kely izany? Ahoana no tsy nanomezany azy sakafo kely sy rano? Inona ny tena zava-dehibe mihoatra noho ny fahasalaman'ny zanaka? Tena nariany ny fototry ny maha olona.
Ny sasany niezaka ny namakafaka ny tena fototr'ilay loza, ho toy ny tsy fahalalàna sy ny teritery atrehan'ireo reny tokantena any ambany indrindra amin'ny fiarahamonina Shinoa:
“Ho faly sa tsia?”: Navelan'i Xiang ho fatin'ny hanoanana ny zananivavy. Tia ny zanany daholo ny ray aman-dreny rehetra. Fa ny sasany mety handratra na hamono ireo zanany mihitsy noho ny tsy fahalalàna. Tena mampalahelo!
“Mpirahalahy mihira”: Tsy misy marina na diso amin'ny fitiavana. Fa diso io rehefa atao tafahoatra loatra. Tsy nanao zavatra ratsy ilay zaza ary tsy nanan-tsiny. Fianakaviana tsy araka ny tokony ho izy, fitiavana tsy araka ny tokony ho izy, toetra tsy araka ny tokony ho izy ary fiainana tsy araka ny tokony ho izy, samy mitondra any amin'ny vintana tsy araka ny tokony ho izy. Tsy misy antony tokana ho an'ny loza toa izao. Ny nahaverezantsika ny fiainana vao misandratr'io ankizivavy io no tena vokatra mampalahelo indrindra.
Samy mamely ilay reny daholo ny olona tsirairay. Eritrereto fotsiny, hatry ny zanany vao iray volana, tsy maintsy nitaiza sy nandray samirery ny andraikitra rehetra izy. Nikarakara ilay zaza ary sady nitady vola ihany koa. Tsy afaka zakain'ny olon-tsotra ny fiainana sahala amin'izany. Vao maika nahatonga azy hitady ny tsara hatrany amin'ny fianaran-jananivavy noho ny olona hafa ny fahamafisan'ny fiainana, ary nitondra azy hanao fihetsika tafahoatra. Sady nitokantokana no mafy loha ilay zanakavavy, izay tsy ampy fahatokian-tena. Mety hahatonga ireo ray aman-dreny ho tezitra sy ho lasa adala ireo karazana toetra ireo. […]
Tsy afaka eritreretina mihitsy ho an'ny reny tokantena ny mitaiza samirery ny zaza. Ny fikomian'ilay ankizy, ny fahantrana ary ny tsy firaharahian'ny fiarahamonina, ireo no tena anton'ny zava-mitranga ankehitriny.